Paul Krugman mitsara: Iwo makumi masere mitsara akanakisa, ndiani iye uye chii dzidziso yake | Ehupfumi Zvemari
Claudi Casals | 21/07/2021 17:45 | General hupfumi
Kana zvasvika pakudzidza nekugadzira mazano, Zvinogara zvichikurudzirwa kuti uzive maonero akasiyana uye nemaonero. Kunyanya munyika yezvemari zvinokurudzirwa kuziva zvishoma nezve vane mukurumbira hupfumi, maonero avo, dzidziso uye nzira. Naizvozvo, zvirevo zvaPaul Krugman, uyo akahwina mubairo weNobel muEconomics, zvinogona kubatsira kwatiri.
Nyanzvi yezvehupfumi iyi inoshoropodza akasiyana magariro uye ezvematongerwo enyika zvinokanganisa hupfumi sekuziva kwedu nhasi. Ini ndinokukurudzira kuti uverenge akakosha mitsara yaPaul Krugman. Uye zvakare, isu tichataurawo nezve dzidziso yekutengesa yaakagadzira uye izvo zvinofungidzirwa shanduko yakazara.
1 Aya makumi masere mazwi akanakisa aPaul Krugman
2 Paul Robin Krugman ndiani?
3 Ndeipi pfungwa yaPaul Krugman?
Aya makumi masere mazwi akanakisa aPaul Krugman
Mashoko aPaul Krugman anonyanya kumira nekushoropodza kwakakomba kwekushaikwa kwehunhu hwetsika uye zvakanakira zvinongowanikwa chete nevapfumi, sekuwana mukana wekuyunivhesiti kana kudzikisa mitero. Ngationei makumi masere emitsara isingakanganwike pazasi:
"Hazvina kukodzera kuve neshanduko kana ikawanikwa nekuita mvumo yakawanda zvekuti inozopedzisira yakupa mhosva kukundikana."
“Kukwezva kune vasina kuchengetedzeka kwepfungwa kwakakosha zvakare kupfuura zvinoita. "Nekuti hupfumi hunokanganisa hupenyu hwakawanda, munhu wese anoda kuva nepfungwa."
"Kune ruzhinji rwevanhu, chirongwa chekugadzirisa hupfumi hachifanirwe kuve chinorwadza kana kusanganisira kuzvipira."
"Zombie yandinofarira ndeyekutenda kuti kudzikisa mitero kuvapfumi kunoita kuti hupfumi hukure uye hunoumba hupfumi hunoguma hwapararira kuvanhu vese."
«Chaunofanirwa kunge uchitsvaga, munyika inogara ichititarisana nezvinhu zvisingashamisi, kutendeseka kwepfungwa: kuda kutarisana nezvakanaka, kunyangwe pavanopokana nepfungwa dzako, uye kugona kubvuma zvikanganiso nekuchinja nzira.»
"Kupedzisa kushushikana uku kungave chiitiko chingaite kuti munhu wese anzwe zvakanaka, kunze kweavo vane zvematongerwo enyika-, magariro- uye nehunyanzvi vakanyura mudzidziso dzeupfumi dzakaomarara."
"Vazhinji vanoti, semuenzaniso, nzira dzekubvumirwa, kunyangwe kumayunivhesiti epamusoro, dzakadzikiswa zvakanyanya."
“Kana kuwedzerwa kwemari kusingashande, kuwedzerwa kwemari, senge zvirongwa-zvinotsigirwa nemari neruzhinji mabasa, zvinofanirwa kutora nzvimbo. Kuwedzera kwezvemari kwakadai kunogona kukanganisa bhajiro remari shoma uye mari shoma. "
Asi rangarira kuti izvi hazvisi izvo zvinowanzoitika-zvinangwa zvemutemo kurudziro; "iri zano rekupererwa, mushonga une njodzi unorayirwa chete kana mushonga wenguva dzose wegadziriro yemari watadza." - Pane rubatsiro rwemagariro.
«Iyi yakareba inguva isiriyo gwara rekunzwisisa izvo zviripo. Nekufamba kwenguva tichava tese takafa.
"Kudzikisa mitero kune vapfumi hakuiti hupfumi, zvinongobatsira kuti vapfumi vapfume."
Imhosva yaani yekutsiva hurukuro yakakomba pakutengeserana kwenyika nezvandauya kuzotora senge pop yekudyidzana? »
Nei Europe yakapindura zvakashata kudambudziko rayo? "Ini ndatoona chikamu chemhinduro: vatungamiriri vazhinji vekondinendi vanoita kunge vakatsunga kuita Hellenize iyo nyaya uye vanotenda kuti avo vari kusangana nematambudziko - kwete Girisi chete - vasvikako nekuda kwekusaremekedza mari."
"Zvinofungidzirwa kuti chetatu chevanhu vanopinda Harvard University vangadai vasina kubvumidzwa makore makumi maviri apfuura."
"Kune imwe nhanho, hongu, imhedzisiro yehunhu hwevanhu: hunyanzvi hwepfungwa, kunyangwe pakati peavo vanoonekwa sevakangwara uye vakadzika, huchagara huine simba."
"Kana ukazvipira kuita zvematongerwo enyika munzvimbo dziri padyo neRepublican Party, unofanirwa kudzivirira pfungwa idzi, kunyangwe iwe uchiziva kuti ndedzenhema."
"Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoisa basa rakareruka uye risingabatsiri kana, panguva dzesimba, chavanogona kutiudza ndechekuti kana dutu richipfuura mvura inenge yadzikama zvekare."
"Kana dambudziko raive marara emari, hutongi hwemari hunofanirwa kunge huri mhinduro."
Uye iro basa revaparidzi, avo vanowanzo sarudza zvinotaurwa nevanozivikanwa vekunze, hazvifanire kufuratirwa kune akaomarara pfungwa dzevanhu vanogona kuverenga maakaunzi emunyika kana kunzwisisa kuti bhizimusi rekuyera ndiwo musiyano uripo pakati pekuchengetedza nekudyara. »
"Ini handisi mutsvene asi ndiri kuda kubhadhara mitero yakawanda."
"Pakutanga kwedambudziko rezvemari, vafambi vakataura kuti hukama hwedu neChina hwakanga hwave hwakanaka uye hwakadzikama, shure kwezvose: vaititengesa matoyi ane chepfu nehove dzakashatiswa, uye isu taivatengesa mari dzekubiridzira."
"Muchidimbu, kubudirira kwe macroeconomic activism, mune dzidziso uye mukuita, kwaita kuti zvibvire kuti microeconomics yemusika yemahara irarame."
"Vapfumi vanoshandisa mari zhinji kuita kuti vanhu vatende kuti kudzikisa mitero kwakanaka kune vanhu vese:"
«The American Prospect Ivo vamwe chete pop vekunze; Vanoshandisa nemaune magazini avo semapuratifomu ezvakaenzana nehondo yekurwisa njere. "
"Hupfumi hunoburitswa sebasa rehunhu, asi nekumwe kumonyoroka: muchokwadi, zvivi zvatine urombo hazvina kumboitika."
"Kana tikaziva kuti vatorwa vanobva muchadenga vanga vachironga kutirwisa uye taifanira kuisa setup yakakura kuti tizvidzivirire kubva kutyisidziro iyi kuti inflation uye bhajeti itore kumashure, dambudziko iri rinenge rapera mumwedzi gumi nemasere."
"Mamiriro ezvematongerwo enyika ane simba rakakosha pakugoverwa kwemari."
"Ndinofunga kuti chero mafuta epasi akadhura, vanhu vanozoashandisa uye voregedza kuenda kune hunyanzvi hutsva."
“Isu takaita zvishoma kwazvo kugadzirisa matambudziko akakonzera Kudzoreredza kukuru. "Hatina kudzidza chidzidzo."
"Tiri mumamiriro ezvinhu apo zvakanyanya kuita kunge vari kukunda."
Nei basa rinoenderana nemutemo risingaratidzike senge rinopesana nekutsvaga kwangu? zvechokwadi? "Ndinofunga kuti imhaka yekuti ndakakwanisa kugadzirisa matambudziko emitemo ndichishandisa nzira imwechete yandinoshandisa pabasa rangu rekutanga."
"Kana usati wabudirira kekutanga, edza futi futi."
“Vashandi havadi kubvuma, vanoti, pakupera kwemwedzi mari iri pasi pe5% pane yavakagamuchira inoiswa muaccount yavo, pane kuti vasatambire mari isingachinji iyo simba ravo rekutenga, zvisinei, rinoonekwa richikanganiswa inflation. "
"Ndinozvibvuma: ndainakidzwa nekuona vanowona kurudyi vachienda musango shanduko yezvehutano yakazove mutemo."
"Kushaikwa kwekudyidzana kwevanhu kwakamiririra chimwe chezvikonzero zvikuru zvekusaenzana uye kurasikirwa kwekufamba kwevanhu."
"Chinangwa hachisi chekuranga vanhu vakapfuma, asi kungoita kuti vabhadhare mugove wavo wekubhadhara mari yezveruzhinji izvo zvinodiwa nevanhu vese."
"Kana paine kudonha mangwana, maturusi ekumutsiridza hupfumi angave asina kusimba."
"United States inoenderera mberi kuva nzvimbo ine rombo rakanaka kune vakapfuma zvikamu zvishanu kubva muzana… Inzanga yakasununguka. "Tinobata vatambi vedu zvakanaka kwazvo."
"Kunyange masimba ekudyidzana kwenyika dzepasi rose achikanganisa nyika dzose dzakasimukira nenzira imwecheteyo, kugoverwa kwemari kwakasiyana nyika nenyika."
"Zviripachena chikamu chakakosha chevagari vanotenda muchokwadi chepamusoro chezvematongerwo enyika kana zvechitendero uye vanofunga kuti hazvina basa kunyepa kana ukashumira icho chokwadi chepamusoro."
"Ndinofunga kuti kuisa panzvimbo yehutano hwepasi rose, chinova chinhu chinogona kuitwa, chinhu chakakosha uye chingamiririra nhanho huru kumberi."
"Kana vanhu vakapusa mune zvematongerwo enyika imhaka yekuti kune vanhu vanofarira zvikuru kuvachengeta vakadaro."
"Hapana humbowo hwesainzi hwekuti kukwidza mubairo mudiki, kusvika pamuganhu, kunokonzera kushaikwa kwemabasa kwakawanda."
«Pane episode mu Twilight Zone mune izvo vesaenzi vanonyepedzera kupinda kwevatorwa kuti vawane rugare rwepasi. "Panguva ino hatichichida, chatinoda ndechekuti tiwane kurudziro yemari."
"Kubudirira hakusi zvinhu zvese, asi nekufamba kwenguva zvinenge zvese."
«Shanduko yenguva pfupi yekusaziva, nguva iyo kusimbirira kwedu kutarisa mune dzimwe nzira kunoita kuti titadze kuona izvo zvakanaka pasi pemhino dzedu, unogona kuve mutengo wekufambira mberi, chikamu chisingadziviriki chezvinoitika patinoedza kunzwisisa kuoma, kwenyika. "
"Chokwadi chaicho hachina kumbogarisana nezvakarotwa neAmerica."
“Kune huori hwakawanda; kune vezvematongerwo enyika vanozvibvumira kutengwa, pamwe neavo vanopa rutsigiro rwavo kana kuburikidza nekupa chiokomuhomwe. "
"Paunokumbirwa kutora kudzikisira mubhadharo, zvinonetsa kuti uzive kana mukuru wako arikutora mukana iwe."
“Chokwadi ndechekuti muenzaniso wega wega wakabudirira wekusimudzira hupfumi muzana ramakore rapfuura, nyaya dzese dzenyika ine urombo iyo yakasvika pamwero wekurarama kana wakaderera, kana zvirinani, yakawanikwa kuburikidza nekudyidzana kwenyika dzepasi rose, ndiko kuti, kuburikidza nekugadzira. kumusika wepasi rose, pane kuyedza kuzvigutsa. "
"Ndine shamwari, masayendisiti ezvematongerwo enyika, masayendisiti, vanogovana vanofarira mune mamwe marudzi esainzi."
"Hatisi kutendeseka nevanhu kana tikapa pfungwa yekuti kutemwa kwemitero kuripe nekuzvibhadhara."
"Kukwanisa kwenyika kuvandudza mararamiro ayo nekufamba kwenguva kunoenderana nekugona kwayo kuwedzera zvabuda pamushandi."
“Kurwisa kudzikira kuri kuita kuti Fed ipindure zvine simba; mari inoshandiswa nemhuri inofanirwa kuwedzerwa kuti ikwanise kubhadhara bhizinesi riri kunetsa. "
"Masayendisiti emamiriro ekunze anokurumidza kuona kuti ongororo yavo haina kungofuratirwa chete asi kutambudzwa."
"Zvakanakisa zvaunogona kutaura pamusoro pemaitiro ehupfumi mune ino kushushikana ndeyekuti, kazhinji, isu takadzivirira kudzokororwa kwakazara kweKuderera Kukuru."
"Muzviitiko zvakawanda, pamwe angangoita ese, huori hwakanyanya kusanzwisisika uye hwakaoma kuziva."
"Kunyangwe chikwereti chikakwidziridzwa zvakakwana kuti zvidzivise kutadza kubhadharwa nekukasira, kunyangwe kuvharwa kwehurumende neimwe nzira kuchangomiswa kwenguva pfupi."
"Ndinotenda munharaunda ine vanhu vakaenzana, inotsigirwa nemasangano anodzikisira hupfumi nehurombo zvakanyanya."
"Pamusoro pazvose, tinofanira kurega kunyepedzera kuti tiri kuita nhaurirano uye dzechokwadi."
"Tichava nesimba rekuita shanduko yakakomba yemari here?" "Kana zvisina kudaro, dambudziko razvino harizove chinhu chakasarudzika, asi maitiro anozotevera zviitiko zvinotevera."
"Vezvematongerwo enyika vanopihwa mubairo wekubata zvimwe zvinzvimbo, uye izvi zvinovaita kuti vadzivirire zvakanyanya, uye vagozvishingisa kuti havana kuzvitenga."
«Ndinotenda muhurumende, rusununguko uye kutonga kwemutemo. "Izvi zvinoita kuti ndive wakasununguka uye ndinodada nazvo."
Asi iyo yekumberi yeCalifornia inoramba ichindishungurudza. "Ndiani angadai akafunga kuti nyika hombe muUnited States, nyika ine hupfumi hwakakura kudarika nyika zhinji asi nyika shomashoma, inogona kuita repaniki nyore?"
"Kubva kunze, zvakaoma kuona mutsauko pakati pezvavanotenda 'chaizvo' uye nezvavari kubhadharwa kuti vatende."
"Kana hupfumi hwango nyanya kushushikana, dzimba uye kunyanya mabhizinesi anogona kunge asingadi kuwedzera kushandisa mari kunyangwe vaine marii, vanogona kungowedzera mari yekuwedzera kubhodhi revatungamiriri."
"Zvematongerwo enyika zvinosarudza kuti ndiani ane simba, kwete ane chokwadi."
"Pfungwa yekuti kutendeseka mukutarisana nezvakanaka hunhu hunenge hwanyangarika pahupenyu hweveruzhinji."
"Nyaya dzevanhu vanobuda muhurombo nekupfuma zvakanyanya, zvisingawanzoitika."
"Nzira chete yekuita pfungwa yezvakaitika kuona vhoti sechirevo chezvematongerwo enyika."
"Kwakatangira kutambura kwedu kudiki mukutevedzana kwechisiko, uye kunogona kugadziriswa nekukurumidza uye nyore kana paine vanhu vakaringana muzvinzvimbo zvemasimba vanonzwisisa chokwadi."
"Hapana akatendeseka zvakakwana, asi gungwa rakajeka remanyepo atinotambura ikozvino chinhu chitsva."
"Mamiriro ezvinhu akadaro, umo marongero emari ave asingashande, ave kuzivikanwa semusungo wemari."
"Vasina kuvimbiswa nhasi ndevechidiki kana mhuri dzechidiki."
«Tekinoroji ishamwari yedu. "Tine hupfumi hwakaderera mukati medu patinosvika nemutengo wakaderera kwazvo."
"Zvinokurudzira sei, saka, kuudzwa kuti zvese hazvina basa, kuti zvese zvaunoda chaizvo kuziva mashoma mazano akapusa!"
"Tese tinotambura nekutenda zviri nyore kwatiri."
"Nyika dzezvematongerwo enyika nekudaro dzinokunda kudyidzana kwenyika."
"Havasi vanhu, asi pfungwa dzinodzivirirwa zvine simba nevamwe vezvematongerwo enyika uye vatauri vezvenhau, kazhinji vanochengetedza, uye vane hunhu hwakafanana: havana hwaro zvachose."
"Pfungwa yekuti pane chinhu chimwe chete chinonzi capitalism haina kunaka."
Paul Robin Krugman ndiani?
Zvino zvatinoziva mitsara yakakurumbira yaPaul Krugman, ngatitaurei zvishoma nezvehupenyu hwake. Icho chiri cheAmerican economist uyo akazvarwa muna 1953 muAlbany. Akagamuchira BA mune zvehupfumi kubva kuYale University uye Ph.D. mune zvehupfumi kubva kuMIT (Massachusetts Institute of Technology). Nezve hupenyu hwake hwekushanda, Krugman aishanda semudzidzisi mumayunivhesiti akati wandei, pakati payo iri Princeton University. Zvisinei, uyu akapfuma economist inomira zvakanyanya mukukunda mubairo weNobel muEconomics muna2008. Iyi trajectory inoita kuti mitsara yaPaul Krugman ive yakanaka sosi yekurudziro uye kudzidza.
Ndeipi pfungwa yaPaul Krugman?
Haasi chete iwo mazwi aPaul Krugman ane mukurumbira, asiwo dzidziso yake yekutengesa. Pachivanhu, Heckscher naOhlin vaitsigira kutengeserana pakati pemaindasitiri akasiyana, nepo Krugman akaronga dzidziso yaibata nezvekutengeserana kwemukati meindasitiri. Ndokunge, maererano neeconomist iyi inotengeswa pasi rose pakati penyika dzine mamiriro ehupfumi akafanana uye nemhando imwechete yezvigadzirwa.
Pakutanga zvaifungidzirwa kuti kutengeserana kunoenderana zvakanyanya munzira iyo zvinhu zvakasiyana-siyana zvinogadzirwa zvakagovewa munyika yega yega, kureva: vashandi, ivhu uye capital. Neiyi nzira zvakanzwisiswa kuti kutengeserana kwepasi rese kwaive nekuchinjana pakati penyika dzekumaodzanyemba nekuchamhembe. Neichi chikonzero, munhu wese anokunda sezvo nyika dzichigadzira mune izvo zvigadzirwa mune kugadzirwa kwadzo zvinonyanya kushanda
Zvisinei, Paul Krugman akaita ongororo dzinoverengeka dzakaratidza kuti bhizimusi repasirese raivepo rakaitwa nezvigadzirwa zverudzi irworwo. Chii chimwe, kuchinjana kwakaitika chete munyika dzekuchamhembe. Kubva panguva ino kwakauya iyo inonzi "dzidziso nyowani yekutengeserana" yakagadzirwa naPaul Krugman. Sekureva kwake, avo vanonyatso kubatsirwa nekutengeserana kwepasi rose nehupfumi hwakanyanya. Naizvozvo, nyanzvi yezvehupfumi iyi inoramba zano retsika rekuti kutengeserana nedzimwe nyika kunowedzera hutano.
Sezvo isu tichiona kwete chete nemitsara yaPaul Krugman, asiwo nedzidziso yake, iye munhu akatsoropodza zvikuru neruzhinji uye nehungwaru hunopenya. Ndinovimba chinyorwa ichi chave chakakosha uye chinokukurudzira iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Paul Krugman Quotes